Ukudibanisa i-twine yabaqalayo kunye nabantwana abaneminyaka engama-3-5 ubudala, iminyaka eyi-7-10-Indlela yokwenza iwele kwiwashi ekhaya: ividiyo kunye nesithombe
Ukwelula ngokufanelekileyo kwi-twine-isiqinisekiso sokuziphatha okukhuselekileyo kokuzivocavoca ekhaya okanye kwiholo. Yenza oku kwaye ngabaqalayo, kunye nabadlali abanomdla. I-gymnastics yokufudumala ikwazi ukuhlala lula kwi-twine ende. Kwakhona kuya kuvumela ukuxhasa uxolo lomfanekiso. Ukuqeqeshwa kwethu kunye nemiyalelo esithombeni kunye nevidiyo zifanelekile abantwana 3-5, iminyaka eyi-7-10. Izifundo ezibalulekileyo ziza kunceda abantwana bakhule bephilile kwaye banamandla.
Ukwelula ngokuphumelelayo kwi-twine yabaqalayo kwikhaya-inyathelo ngesinyathelo sevidiyo
Abaqalayo bafunda ukwenza umgca omhle okanye ubude obude buqhekeka lula. Ukwenza oku, kufuneka kuphela ukuqhuba uqeqesho kwaye uthabathe isethi elula yemisebenzi. Imithwalo engabalulekanga iya kubandakanywa intlungu kwiimisipha. Ngoko ke, kufuneka banikezwe ngokuthe ngcembe kwaye bangakhangeli. Akuyimfuneko ukuya kwi-gym yokuqeqeshwa. Ngoncedo lwevidiyo ezithathiweyo, abaqalayo banokululaza iwele ngekhaya.
Izifundo zezinyathelo ngeyinyathelo zokufundisa i-twine ekhaya kubaqalayo
Ukujonga ngokucophelela izifundo zevidiyo kubaqeqeshi abaqeqeshiweyo, unokuqalisa uqeqesho ngokukhawuleza. Ukuqhutyelwa kwamanyathelo athatyathwe ngolu hlobo luza kunceda ukuhlala kwi-twin longitudinal okanye ejikelezayo ngokukhawuleza. Isantya soqeqesho sincike kuphela kwiminqweno yomntu owenza izivo zokuzilolonga, ifomu lakhe lomzimba.
Ukulungelelanisa i-twine kubantwana abaneminyaka emi-3-5, iminyaka eyi-7-10-imizekelo eneefoto kunye namavidiyo
I-gymnastics yabantwana ibalulekile kubo bonke abantwana kunoma yiphi ubudala. Ikuvumela ukuba uhlakulele ukuguquguquka kwemvelo, ukuqinisa nokwakha isisipha, ukwakha umfanekiso omhle. Ngokunweba rhoqo, abantwana abaneminyaka emi-3-5 okanye i-7-10 ubudala banokuhlala phantsi kwi-twine.
Indlela yokwelula kakuhle i-twine kunye nabantwana abaneminyaka engama-3-5 ubudala?
Kubantwana, kufuneka ukhethe izenzo eziya kufana nomdlalo wokuzonwabisa. Uqeqesho olulula aluyi kubangela ukungazinzi kubantwana. Ngexesha elifanayo, ukwandisa ukuguquguquka kwabantwana abangaphantsi kweminyaka emi-5 kuya kuvumela ngamnye ukuba ahlale ehlakeni ngeveki. Ukukhetha iindlela ezilula zokuqesha abasebenzi kunye nabantwana kubaqeqeshi kunye noomama esi sifundo sevidiyo esilandelayo siya kunceda. Iqulethe imiyalelo eninzi.
Iimifanekiso-zemizekelo yezandla zokuswela i-twine kubantwana aba-7-10 ubudala
Abantwana abaneminyaka engaphezu kwe-7 ubudala kufuneka benze i-gymnastics ngaphezu kwezingane. Yimiselwe yile mfuneko ukuphucula umkhuba wokwenza umzimba kunye nokufezekisa iziphumo ezibekiwe. Kodwa imithwalo enamandla kufuneka isuswe kanye kanye. Abantwana kufuneka benze imisebenzi ngaphandle kokuziva bengakhululeki. Ngenxa yoko, abafana bafuna ukufudumala imisipha kakuhle phambi kwemithwalo ephezulu. Qala ukuqeqesha nge-jumps, uhamba ukusuka ecaleni ukuya ecaleni kumasekhondi angu-30. Emva koko landela imilenze ngemilenze nezandla. Uncedo lokulungiselela iiklasi eziphambili zokujikeleza ukusuka kwelinye linye ukuya kwelinye. Emva kokuba zenziwe, abafana kufuneka benze oku kulandelayo:
Hlala phantsi, uthathe inzwane yomlenze okhohlo ukuya kwicala lasekunene, kunye nebhokisi elifanelekileyo ngakwesobunxele. Amathanga azama ukulungisa omnye nomnye (njengoko kuboniswe kwisithombe). Izandla zilula phambili ngokubanzi kwaye zihlale kule ndawo imizuzwana embalwa. Emva koko utshintshe indawo yeemilenze (leyo eyayiphezulu kufuneka ihambe phantsi) iphinde iphinde isetyenziswe ngezandla zakho. Kucetyiswa ukuba ubambe isifundo imizuzu 2-3.
Hlala phantsi, ubeke iinyawo kunye uze ubasondeza kumzimba. Emva koko zula izandla zakho, uzama ukufikelela phantsi ngesifuba. Hlaziya izihlunu uze uqonde imilenze yakho. Phinda ubuncinane imizuzu emi-5. Thatha ikhefu elifutshane kwaye uhambe nje ngeenxa zonke.
Hlala phantsi, imilenze isasazeka kude kunokwenzeka. Ngaba umzimba uguqula, uzama ukubeka ngqo kwimilenze yakho. Phinda ubuncinane amaxesha angama-16.
Hlala phantsi, wanda imilenze. Emva koko yenza intlambo phambili, uzama ukulula izandla zakho ngokubanzi. Emva koko uhlale phantsi, ushiye imilenze yakho kwindawo efanayo kwaye uzame ukugcina umqolo wakho uqondeke, kwaye izandla zenzeke ngokukhawuleza. Phinda 10-16 maxesha.
Inkathazo elungiselelwe yinyaniso iya ku kholisa abantwana abantwana abaneminyaka eli-7 ukuya ku-10 ubudala. Ngelo xesha, kuya kubanceda bakhule bephilile. Abazali kunye nabaqeqeshi bafuna kuphela ukufundisa abantwana ukuba bathande izinto ezinjalo. Uqeqesho oluqhelekileyo luya kunceda ekuqiniseni kakhulu imisipha yemilenze kunye ne-press.
Ukwelula okulula kwendlu kwiphambano-i-step-by-step exercising with chair
Ukuqhuba ukuqeqeshwa komzimba okwelula i-twine ekhaya kungenziwa kwindlela engavumelekanga-kunye nesihlalo. Le ndlela izokukunceda ngokukhawuleza ukufudumala izihlunu kwaye ingabandakanyi ukubukeka kwentlungu emilenzeni. Ukuziphatha ngokufanelekileyo lo msebenzi uya kunceda ukulungiselela ividiyo.
Ividiyo-umzekelo wezinyathelo-nge-nyathelo ezisebenzayo kunye nesihlalo sokwelula i-twine
Ngokunamathela ngokuthe ngqo kwiingcebiso zabaqeqeshi, kulula ukwenza umsebenzi wesikolo kunye nesihlalo. Isakhiwo esincomekayo sekhaya sinokuthathwa njengesithuba esihle kakhulu sokuqeqeshwa kwindawo yokuzivocavoca. Akufuneki izakhono ezizodwa kwaye zifanelekile nakwabaqalayo.
Indlela yokwenza ilula iwele ngekhaya - ividyo kunye nesenzo sezithombe
Iividiyo kunye neefoto esizifumene ngayo uncedo ukuba ufunde indlela yokwenza i-twine stretch ekhaya ngaphandle kobunzima obukhulu. Ukuqeqeshwa okulula kunokwenziwa ngabaqeqeshi bama-gymnasts kunye nabaqalayo.
Ukukhethwa kokuzilolonga kunye nesithombe sokwelula i-twine ekhaya
Ukufumana ukulula kwesilungelelwano esifanelekileyo ngaphandle kweentlungu kuya kunceda amantombazana enzima. Kufuneka iphindwe rhoqo imihla (okanye ubuncinane ama-3-4 ngeveki). Ukuqhuba isifundo unemizamo encinane. Phakathi kwemisebenzi ngokwabo ivunyelwe ukwenza ikhefu lesibini-30.
Hlala phantsi, ubeke imilenze kunye kwaye uguqe ngamadolo. Gcina iinyawo zakho ngezandla zakho, uze ucinezele ngamadolo akho esifubeni sakho. Nciphisa ngokukhawuleza imilenze yakho, i-torso phambili. Kufuneka uzame ukugcina umgama omncinane phakathi kwesifuba namadolo.
Ukuguqa, umzimba uhambelana nomgangatho, kunye neengalo - i-perpendicular to the body. Inyawo elinye lifakwa kwinqanaba, izandla zishukunywe kufuphi nale nqanaba. Isifuba sicinezelekile emadolweni. Hamba ngokukhawuleza umlenze wakho kwaye uqhube phambili kunye nesifuba sakho. Phinda usebenzise umlenze wesibili.
Yenza i-classic lunge phambili. Ngenisa ngobumnene umlenze ongemuva, shenxisa iingxenyana phambili kwaye uthembele kuzo. Gxotha idolo lomlenze ogobile phambili, uze ulungele umlenze uze uwubuyisele. Okwesibini kukuhambisa isicwangciso esifanayo phambili. Phinda ngaphantsi kwezihlandlo ezi-5 ngomlenze ngamnye.
Buyela kwi "lunge" isikhundla. Umlenze wempuphu wabuyela emadolweni kwaye izandla zitsala unyawo ukuya phezulu. Ngexesha elifanayo, gcina isigxina kwindawo ejikelezayo (zombini imisipha yomshicileli kunye nemisipha yemilenze iya kusebenza). Phinda umlenze wesibili.
Umlenze owodwa ukuqhubela phambili, okwesibini - kude kube ngangokunokwenzeka. Ngaphantsi kwetendon yomlenze, ekhoneni ngaphambili, faka i-roller. Emva koko bangela umlenze phambili, uzama ukuguqa ngamadolo. Phinda umlenze wesibili.
Ukulandela le miyalelo kuya kunceda ukwenza umfanekiso udibene. Uqeqesho olunjalo luya kunceda ukunika isinquno kunye nokwenza imilenze ehambelanayo.
Ividiyo-umzekelo wamalungiselelo okulungiselela i-twine ekhaya
Unokusebenza ekhaya kunye nezinye izinto ezinzima. Kule meko, iibhloko zokuzivocavoca zinokuba ziphela, okanye zifaneleke kuphela kubaqalayo okanye abaqeqeshi bezemidlalo. Ngokomzekelo, abadlali be-novice bafana nale sifundo sevidiyo: Ngokukhawuleza ukuzisa umzimba wakho ngendlela efanelekileyo kuza kunceda imidlalo engapheliyo. Ngexesha elifanayo, unokwenza iimvavanyo ngisho nasekhaya. Izinkimbinkimbi ezilula ze-gymnastics kunye nempilo ziza kwenza imilenze yakho ibe yincinci, kunye neentambo zakho. Yaye indlela elula yokuphumeza iziphumo ezinjalo ilula ukuya kwi-twine (i-longitudinal okanye i-transverse). Kuthatha ixesha elifutshane kwaye kufanelekile ukuba baqale abagijimi, abantwana baka-3-5, iminyaka eyi-7-10. Ukuzivocavoca kulula kuza kunceda ukukhawuleza kwaye kulula ukuqinisa iintlungu zemilenze.
Indlela yokuhlambulula isisu kunye namacala emva kokubeleka ekhaya ngexesha elifutshane. Indlela yokukhawuleza ukulahleka isisindo kumntu kwaye ususe amanqatha kwisisu esisetyenziswayo
Ukuqeqeshwa kweKegel kwabasetyhini ekhaya
Iimfihlelo zesibalo esincinci kunye nesicatshulwa esihle se "ntombi kayise" uLisa Arzamasova
Inkwenkwezi "Abakhwenkwe abayinyani" babelana ngokuzivocavoca okulula kunye nokusebenzayo kwiinkontsho ze-elastic
Emva kwezi zivivinyo uya kuthi ulahlekelwe ngumzimba! Umsebenzi wokutshisa umbane # 1
Umculi u-Beyonce uyabuyela ngokukhawuleza kwimeko efanelekileyo: inkwenkwezi yokuqeqeshwa kwezemidlalo
Njengoko i-Inna Malikova iyakwazi ukubheka njengendodana yonyana wakhe: Ukutya kunye neenkwenkwezi zoqeqesho
Uthando lubalela kunye nemiphumo yabo: Ingozi kwintwaba kunye nentlawulo yomthengi
Imvubelo yepilisi kunye nama-apula kunye nama-crranberries
Ukupheka ikhekhe lePasika
IHoroscope ngoFebruwari 2018 - Inkunzi yowesifazane - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Kutheni sifuna ukuhamba ngezithende?
Ngubani oza kuphumelela u-Bachelor 5 kwi-TNT - yeyiphi yamantombazana aya kukhethwa ngu-Ilya Glinnikov
Inkcazo ye-herbaceous plant-camomile
Yenza ibele enhle ngoncedo lokusila
Yintoni ongayidla ngaphandle kokulimaza kwimpilo yakho?
Indlela yokucela ngokufanelekileyo uncedo kumntu?
Kutheni ama-horoscopes amanga, ayenzeki kwaye aphikisana
Ukubhiyozela uFebhuwari 23 emsebenzini?